Nepali Sahitya Bikash UK – NLDC UK » Page 3
जिन्दगिमा गुमेको नै चिजहरु प्यारो हुन्छ – नव राज घिमिरे
0 गजल admin
Tags: गजल, नव राज घिमिरे
जिन्दगिमा गुमेको नै चिजहरु प्यारो हुन्छ छोडी जाने निष्ठुरी नै भुलाउन गारो हुन्छ जब फूल बदलिन्छ फूल पक्कै रहदैन कोमलिदो मुटु पनि ढुङ्गा जस्तै साह्रो हुन्छ
हास्छु भन्छु बल्ल तल्ल सधै ब्यथा मिल्छ – Bimala Gautam
0 मुक्तक admin
Tags: muktak, nepali sahitya
हास्छु भन्छु बल्ल तल्ल सधै ब्यथा मिल्छ बिर्शौ भन्छु आँखा चिम्ली सम्झनाले पोल्छ । सम्झनाको क्षणहरु आँखा अघिल्तिर सासै फेर्न गाह्रो हुन्छ सम्झील्याउदा खेर ।
तिम्ले गर्दा मेरो खोजि म मरेको हुन्छु होला
Tags: gazal, navarajghimire, nepali, sahitya
तिम्ले गर्दा मेरो खोजि म मरेको हुन्छु होला आझै भेट छैन भोलि म मरेको हुन्छु होला शरिरमा दोष छैन चाहनामा केहि छैन तिम्रो रोग म हु रोगि म मरेको हुन्छु होला
नेलसन मण्डेला ! – कोमल मल्ल
0 कबिता admin
Tags: komal malla, nelson mandela, sahitya
नढल्नु पर्ने बृक्ष ढल्यो ??? बिना बादल विश्वमै झरि पर्यो त आखा आखाबाट ..
म त्यही हुँ तिमीले बिर्सीगएको मानिस
–हेमन यात्री धेरैपछि सम्झनाको साँघु तरेर तिमीले मेरो बारे सोध्यो– कसरी ढाटूँ म आफूलाई ? तिमीले बिर्सीहिँडेको मानिस म होइन भनेर । सप्पै–सप्पै बिर्सीहिँडेको तिमीले खै ! के सम्झ्यौ कुन्नी दुर देशमा पुगेर ?
0 कथा admin
– माधव सयपत्री म मूढजस्तो बनेको शरीरलाई ओछ्यानमा यताउता पल्टाइरहेको थिएँ । शरीर जीर्णजीर्ण बन्दैथियो । औषधिले समेत काम गर्न छाडेको थियो । छोराछोरी हुर्काएर मर्ने मेरो इच्छा मर्दैमर्दै गएको थियो । ओछ्यानले पनि रिस गर्न थालेको थियो । त्यसैले त होला नि बिझाएको ! श्रीमतीले पनि त्यति वास्ता गर्न…
म दुर्बीन लगाएर नया नेपाल खोज्दैछु फोटोहरु समेटेर नया नेपाल खोज्दैछु
सकेसम्म हामी रमाएर बाँचौ
गज़ल सकेसम्म हामी रमाएर बाँचौ सधैँ नाम इज्जत् कमाएर बाँचौ नरोजौं छहारी उपेक्षा जहाँ छ नछुट्ने सहारा समाएर बाँचौ
Tags: gatibidhi, nepali sahitya bikash uk
नेपालका एकजना प्रखर साहित्यकार, समाजसेवी तथा राजनैतिक विश्लेषक जगदीश घिमिरेको असामयिक निधनको समाचारले नेपाली साहित्य विकास परिषद युके परिवार स्तव्ध र शोकाकुल भएकोछ । हामी दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको लागि परमेश्वरसंग प्रार्थना गर्दै यस दुखद घडीमा शोकसन्तप्त परिवारमा धैर्यधारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने कामना सहित समवेदना प्रकट गर्दछौं…